Nchịkọta Weebụ Web: Ọ Bụ Ụzọ Kasị Mma Isi Nweta Data Site na Weebụ? - Ihe na-enyere gị aka ịza ajụjụ
Inweta data sitere na weebụ abụghị ọrụ dị mfe mgbe niile. Ị nwere ike ịnwale ihe niile ịchọta saịtị nke nwere data ịchọrọ ma enweghị ike ibudata ma ọ bụ detuo na mado ya ọdịnaya. Otú ọ dị, adala mbà! Enwere ụfọdụ ụzọ dị elu iji nweta data na usoro dị mma maka ịmalite imegharị:
Ị nwere ike ịnweta data sitere na API weebụ (mmemme mmemme ngwa). Ọtụtụ ngwa weebụ dị ka Facebook na Twitter na-enye ọnụọgụ nke na-enye ohere ịnweta ohere ha. Ọ dị mfe ịnweta azụmahịa na ọbụna data gọọmenti na-eji ndị dị otú ahụ.
I nwekwara ike wepu data si PDFs. Otú ọ dị, o nwere ike ọ gaghị adị mfe ebe ọ bụ na PDF bụ usoro dị mma maka ndị na-ebi akwụkwọ. Enwere ohere ị nwere ike idafu usoro nke data dị mkpa mgbe ibudata na PDF.
E nwere ụzọ dị elu nke wepụ data weebụ - wepụ data site na iji weebụsaịtị ihe nchịkọta ọdịnaya .
Gịnị mere iji jiri ihe ntanetịime ihe nchọgharị weebụ?
Na-echebara ọdịdị dị iche iche nke ọdịnaya dị na ntanetị na mgbagwoju anya nke ntanetị dabeere na weebụ, enwere ọtụtụ nnukwu ihe mere ị kwesịrị iji tụlee iji mkpokọta weebụ iji nweta ozi ị chọrọ. Nke a bụ nkowa dị mkpirikpi nke ihe ndị a:
Ichapu saịtị na-enweghị eriri
Ọnụ ọnụ ọnụ bụ akụkụ dị mkpa ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ ụzọ iji nweta data site na net. Na omume, ọ pụtara ịmepụta njedebe na ọnụ ọgụgụ nke oge onye ọbịa nwere ike ịnweta saịtị n'enweghị onye a na-ewere dị ka DDoS (nke a na-ekesa ọrụ. ) agha. Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ihe kachasị na ahụmahụ gị nchịkọta data, jiri nkata weebụ . Imirikiti saịtị anaghị agbachitere ọdịnaya ha site na scrapers ka ị nwee ike inweta ozi ahụ dị mkpa n'enweghị ihe ọ bụla.
Nọgide na-ama aha mgbe ị na-edecha
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta data site na weebụ na nzuzo, nchịkọta weebụ bụ ụzọ kachasị mma iji gaa banyere nke a. Ihe ntanetị weebụ na-enye gị ohere ịme nza ajụjụ dị mfe n'ejighi ịdenye aha. E wezụga kuki gị na adreesị IP, ọ dịghị ihe ọzọ nwere ike iduga gị na saịtị.
Nchịkọta weebụ na-enweta gị data nke dị njikere
Nchịkọta weebụ abụghị ihe sayensị rọketi. Ọ dịghị mkpa ịkpọtụrụ onye ọ bụla na nzukọ ahụ ma ọ bụ echere saịtị iji meghee API. Naanị nyochaa ụfọdụ ụzọ ntanetị isi na ihe ntanetị weebụ gị ga-arụ ọrụ ndị ọzọ.
Ị nwere ike iji scrapers web iji nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị data niile site na saịtị ọ bụla. Ọ bụ, ya mere, ụzọ kasị mma iji nweta data site na weebụ tụnyere ndị ọzọ data mmịpụta usoro. Oge ọzọ ịchọrọ inweta data ọ bụla na weebụ, jiri ihe ntanetị weebụ na ọrụ gị ga-adị mfe ma na-adọrọ mmasị karịa mgbe ọbụla Source .